A tọhapụrụ Firefox 73 na ndị a bụ akụkọ kachasị mkpa | Site na Linux
Ahapụla Firefox 73 na ndị a bụ akụkọ kachasị mkpa
Mozilla ewepụtara ụdị 73 nke ihe nchọgharị weebụ Firefox ya, mbipute nke onye bipụtara ya gosipụtara dịka mmepe pere mpe nke tumadi webatara bug na nche fixes.
Firefox 73 na-ewebata ntọala mbugharị ụwa niile na "Asụsụ na ọdịdị" ngalaba. Nhazi a na-enye gị ohere ịtọ ọkwa ọkwa mbugharị Firefox enwere ike ịbawanye ma ọ bụ belata dị ka ọ dị mkpa. Agbanyeghị, a na-agbanwe mgbanwe ọ bụla na ọkwa mbugharị emere na saịtị.
Nke abuo, Firefox 73 na - eme ka ọdịyo dị mma ma ọ bụrụ na egwu dị ọsọ ọsọ ma ọ bụ nwayọ na ndị ọrụ Windows ndị họọrọ usoro ngosipụta dị elu nke sistemụ nwere ike ịchọpụta na ebe nrụọrụ weebụ na overlays peeji na-ejigide ihe oyiyi ndabere.
Ndị a na-aba na-nkwarụ mgbe Windows nnukwu iche mode na-nyeere. Nke a kwesịrị ịkwado ọgụgụ nke saịtị maka ndị ọrụ na-adịghị ahụ ụzọ.
Mgbanwe ọzọ nke pụtara na Firefox 73 bụ nke ahụ na WebRender nsụgharị engine na-arụ ọrụ na kọmputa nwere nkọwapụta ihuenyo erughị 1920 x 1080 pixels (FHD) na ndị a kwadebere na NVIDIA GPU na ndị ọkwọ ụgbọala dị elu karịa 432.00. Ọzọkwa, Network Settings taabụ na-enye ndị ọrụ ohere ịkọwapụta NextDNS dị ka DNS karịrị ndị na-eweta HTTPS, kama CloudFlare.
Banyere mmelite nke ngwaọrụ ndị nrụpụta, ihe - CSS ezi uche Njirimara, ebe ụdị ọhụrụ a nke Firefox sEmeela ka ha baa ọgaranya site na ihe abụọ dị iche iche: ịmegharị iwu-ịkpa agwa-imebi iwu na omume imebi iwu.
Njirimara ọhụrụ ndị a na-enye ụzọ ezi uche dị na ya na omume xy akwụkwọ mpịakọta, na-enye gị ohere ijikwa omume nke ihe nchọgharị ahụ mgbe njedebe nke mpaghara mpịakọta ruru.
N'aka nke ọzọ interface HTMLFormElement nwekwara usoro ọhụrụ, rịọ Nyefee () . N'adịghị ka usoro ochie (ma dịnụ) nyefere (), rịọSubmit () na-eme ka a ga-apị bọtịnụ akọwapụtara, karịa ị nyefere onye nnata ụdị data ahụ.
Banyere mmelite DevTools- Enwere mmelite DevTools na-atọ ụtọ nke mmasị na Mozilla Firefox 73 ma enwere ike ịhụrịrị atụmatụ ndị na-abịa na Firefox DevEdition. Ọmụmaatụ, ọ ga-ekwe omume ị nwere i cleanomi CSS snippets dị ọcha mgbanwe panel nke Inspektọ enweghị enweghị + na - ihe ịrịba ama.
Mmezi na DevTools lekwasịrị anya na melite arụmọrụIji maa atụ, iji mee ka ọrụ onye ọrụ dị nro ma ọ bụ iji mee ka oge ị na-ebuwanye ibu nke nnukwu ederede ederede na debugger, ebe ọ na-eweta obere esemokwu na ọkwa njikwa.
N'ikwu okwu n'ozuzu, Firefox 73 na-eme ka ndebanye ederede na-atụkwasị obi nke ukwuu ma hụ na ị nwetara faịlụ ahụ ziri ezi.
Firefox 73 console enwetawokwa karịadịka ọ na-egosipụtazi njehie netwọk CORS dị ka njehie, ọ bụghị ịdọ aka ná ntị, iji nye ha visibilụ ha kwesịrị.
Ọzọkwa, a ga-etinye mgbanwe ndị ekwuputara na nkwupụta ahụ na autocomplete. Mgbanwe a na-eme ka ọ dị mfe ide ederede dị ogologo na nchịkọta akụkọ ọtụtụ.
Ọzọkwa, nhazi DevTools maka nko na-emechi onwe ya na-arụ ọrụ ugbu a na njikwa ahụ, na-eme ka ị bịarukwuo ahụmịhe edemede na IDE. N'ikpeazụ, enwere ike ịdekọ ndekọ njikwa site na iji nzụlite na ụdị ọhụụ nke ihe nchọgharị weebụ Mozilla.
Kedu otu esi etinye ụdị Firefox 73 ọhụrụ na Linux?
Ndị ọrụ Ubuntu, Linux Mint ma ọ bụ ụfọdụ ndị ọzọ sitere na Ubuntu, Ha nwere ike ịwụnye ma ọ bụ melite ụdị ọhụrụ a site na enyemaka nke PPA nchọgharị.
Enwere ike ịgbakwunye ya na sistemụ site na imeghe ọdụ na ime iwu ndị a na ya:
Mere nke a ugbu a, ha ga-etinye na:
Maka Arch Linux ọrụ na nkwekọrịta, na-agba ọsọ na ọnụ:
Ma ọ bụ ịwụnye ihe nchọgharị ahụ, ha nwere ike ime ya na iwu ndị a:
Ugbu a maka ndị bụ ndị ọrụ Fedora ma ọ bụ nkesa ọ bụla ọzọ sitere na ya, mepee ọnụ ma pịnye iwu na ya (ọ bụrụ na ịnwee ụdị ihe nchọgharị gara aga):
Ma ọ bụ iji wụnye:
Finalmente ọ bụrụ na ha bụ ndị ọrụ OpenSUSEHa nwere ike ịdabere na ebe nchekwa obodo, nke ha nwere ike itinye nke Mozilla na sistemụ ha.
Enwere ike ime nke a site na njedebe na ya site na ịpị:
para ndị ọzọ Linux nkesa nwere ike ibudata ọnụọgụ abụọ nchịkọta site njikọ na-esonụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Ahapụla Firefox 73 na ndị a bụ akụkọ kachasị mkpa
Wayland 1.18 biara na nkwado meson, API ọhụrụ na ndị ọzọ
Raspbian 2020-02-05 biara na ngwugwu ngwugwu, PcmanFM na ndi ozo